KENYA OO KAALMO U RAADINAYSA CIIDAMADA NABAD-ILAALINTA EE SOMALIYA.
Wargeyska maalinlaha ah ee East African Standard, kana soo baxa Nairobi ayaa maalintii khamiista faafiyey war bixintan soo socota:
Dawladda Kenya ayaa maanta waxay ku baaqday in taageero weyn oo caalamiga la siiyo ciidamada nabad-ilaalinta Somaliya qaabilsan, si loo dhaqan geliyo heshiiska nabadda ee la filayo in bishaan la gaaro.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya Mudane Kalonzo Musayoka oo joogga shir madaxeedka dalalka Afrika uga socda magaalo madaxda dalka Mosambique ee Maputo ayaa wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Reuters,wuxuu ku yiri,
" Waxaan ka filaynaa beesha caalamka, Yurub, iyo Dawladda Maraykanku, in ay maalgeliyaan hawlgalkaan weyn."
" Somaliya nabad lagama gaari karo, haddii aan xoog la adeegsan," ayuu intaas ku daray.
Somaliya muddo toban sano ka badan ayey dawlad la’aan ahayd, tan iyo markii la riday xukunkii Maxamed Siyaad Barre 1991dii.
"Musharixiinta kale ee Soomaliyeed waxaan kaga duwanahay anigoo kuwooda ugu da’ada yar ka mid ah, 41 sano ayaan jiraan, waxaan kaloo kaga duwanahay waxaan dhashay wakhti ay Soomaaliya xor ahayd 1962dii" Xuseen Caydiid..
Wixii wakhtigaas ka dambeeyey, dagaal-oogeyaal, ka kala tirsan beelaha waaweyn, ayaa ku hardamayey xukunka dalka, oo cad-cad u sii kala qaybiyey.
Dibolomaatka Kenyanka ah Bethuel Kiplagat ayaa hoggaaminaya wada xaajoodyada lagu doonayo in dawlad ku-meel-gaarka ah Somaaliya loogu dhiso, wuxuuna filayaa in dhammaan madaxda beelaha iyo dagaal-oogeyaashuba, ay heshiis wada saxiixaan inta aanay bishaan Luliyo dhammaan.
Kooxaha Soomalidu waxay, si ku meel gaar ah, horay ugu sii heshiiyeen in ay sameystaan baarlamaan xubnihiisu 351 ka kooban yihiin, oo ay ku wada jiraan afarta beelood oo waaweyn iyo beesha yar. Golaha barlamaankuna wuxuu dooran doonaa guddoomiye, kaas oo hoggaamin doona doorashada madaxweynaha ku meelgaarka ah.
Qorshaha Kenya waa in dawladdaas ku meelgaarka ahi ay jirtaa muddo lix sano ah, waxayna sameynaysaa hay’adihii demoqaraadiga ahaa, doorashooyinka xorta ahi, inta aanay dhicin ka hor. Mudane Musayoka wuxuu ku taliyey, in ciidamada nabad-ilaalintu ay hoos yimaadaan Ururka Midnimada Afrika, iyaga oo Qaramada Midoobayna taageero buuxda ka haysta.
DHAWAAQII C/QAASIM OO AY XASAN ABSHIR IYO DEEROW GANAFKA KU DHUFTEEN
Shir jaraa'id oo ay Nairobi ku qabteen Xasan Abshir iyo Deerow ayey ku sheegeen in ay....Akhri Warbixintii Ibraahim Maxameddeeq July 7
Mudane Musayoka wuxuu sheegay, arrimaha hubka dhigista dhammaan kooxaha dablayda, abaabul-ka saarkooda iyo dib isugu-dhafka dablaydii hore, si ay uga mid noqdaan bulshada caadiga ah, ay ka mid ahaayeen dhibaatooyinka ka hor iman jirey, dawlad kasta oo ku meel-gaar ah oo la isku deyey in la dhaqan geliyo. "Ciidamo nabad-ilaalineed, la’aantood, mar kasta hawsha waa lagu hungoobayey" ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibedda ee Kenya mudane Musayoka.
Saraakiisha sare ee xoghaynta Ururka Midowga Afrika, waxay sheegeen in Kenya ay jeceshahay in Somaliya loo diro ciidamo Afrikaan ah oo nabadda-ilaaliya, kadib isku daygii Qaramada Midoobay ee 1990 meeyadii.
Isku daygii Maraykanku sameeyey si uu u soo celiyo nidaamkii, guul darro ayuu ku dhammaaday, kadib markii dagaallo ka dhacay bartamaha magaalada Mogadisho Oktoobar 1993, lagu dilay 18 askarta Amerikaanka ah, iyo boqolaal isgu jira dagaal yahanno Somali ah iyo dad rayid ah.
1'da Luulyo oo Nairobi Siweyn Looga Xusay
SHEEKH AADAN MADOOBE: “Talada banaanka aan soo dhigno”
COL.C/LLAAHI YUUSUF: “Waxa la isku hayo ma idiin sheegaa?”
CADDOW: “Meel aan u noqonaa nagama horaayaso”
KIPLIGAT: “Kenya ayaa ugu hor aqoonsanaysa dawladda dhalata”
Dhammaan ka akhri warbixintii Ibraahim Maxameddeeq